လူမျိုးရေးလား ?? …. နယ်မြေလုပွဲလား ?? …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » လူမျိုးရေးလား ?? …. နယ်မြေလုပွဲလား ?? ….
လူမျိုးရေးလား ?? …. နယ်မြေလုပွဲလား ?? ….
Posted by thu thu . sittwe on Jun 12, 2012 in Opinion - Op-ed, Think Tank | 31 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ရောက်ရှိနေထိုင်ကြတာလဲ?????
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ လူဦးရေ အဆမတန်တိုးပွားလာမှုနှင့် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတေလာမှု၊ မုန်တိုင်းမကြာခဏဝင်ခြင်းကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးမဖြစ်ထွန်းနိုင်သဖြင့် ဆင်းရဲခြင်းဒဏ်နဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်မရှိတော့သည့်အဆုံး နယ်မြေခြင်းကပ်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ တစ်စတစ်စ ခိုးဝင်အခြေကျလာကြပါသည်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေကို လူတန်းစားခွဲခြား ဆက်ဆံပါသလား????
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို စသိချိန်မှာ ဟာရီကုလားတဲ့ … ငယ်ငယ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရေလောင်းအိမ်သာစနစ်မရှိခဲ့ပါ … ဇလားအိမ်သာကိုသာ သုံးခဲ့ကြပါသည်။ အဲဒီဇလားတွေကို လာသိမ်းတာက ဟာရီကုလားတွေပါ။ မြောင်းတူးမယ်၊ အညစ်အကြေးလျှော်ဖွတ်မယ်၊ အထွေထွေသန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ခိုင်းကြတယ်။ မြူနယ်စီပါယ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေပဲများတယ်။ အထမ်းသမားတွေ၊ စပါးရိတ်သမားတွေ၊ တံငါသည်တွေအများစုဟာလဲ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေပါ။ ဒါတွေဟာ ကျွန်မတို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေသိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီအိမ်ခြေမဲ့၊ နိုင်ငံမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ပါဘူး။
ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အလုပ်ကြိုးစားကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အင်အားကို အသုံးချပြီး ငွေရှာကြတယ်။ စားတော့ ဆားနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဝတ်တော့ နံငယ်ပိုင်း၊ နေတော့ တဲကုတ်၊ ဒီလိုနဲ့ ငွေနဲနဲစုမိတော့ ….
ဒီအချိန်မှာ လဝကတွေ (ဒေသခံ လဝကတွေမဟုတ်ပါ) …
သူတို့ဆီက ငွေလေးနဲနဲယူမိတော့ … မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေ အများကြီးပါလား ….
ရခိုင်မဟုတ်တဲ့ တခြားသော မြန်မာမလေးတွေ သူတို့ရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုမသိတော့ …. အင်းးးး …. ရင်လေးတယ် ….
တစ်ချို့ကုလားတွေကပြောကြတယ် … ရခိုင် မူဆလင်တဲ့ .. ရခိုင်လူမျိုးမှာ မူဆလင်ကိုးကွယ်တာ မရှိဘူး …
ခိုးဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ပေါက်ဖွားနှုန်းကကြောက်စရာ …
အခုအချိန်မှာ သူတို့တွေက ပိုက်ဆံနဲနဲရှိကြတော့ လူ့အခွင့်အရေးလို့ အော်နေကြတယ်။ သူတို့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေကို ဘယ်လိုကြီးပြင်းစေခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရဲ့လား??
စကားပြောတတ်၊ လမ်းလျှောက်တတ်ပြီဆိုရင် မြို့အနှံ့လျှောက်ပြီး ထင်းခွေခိုင်းတယ်။ အသက် ငါးနှစ်လောက်မှာ အထမ်းသမားဖြစ်နေပြီ။ အရင်တုန်းက ကျွန်မတို့အိမ်ခြံစည်းရိုးက ဝါးထရံ … ညတိုင်း ညတိုင်း အိမ်ခြံစည်းရိုးကို လာချိုးတဲ့သူရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ ကျွန်မစောင့်ဖမ်းလိုက်တော့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ပါလား .. ကလေးလေးကငိုပြီးပြောတယ် … ဒီထင်းမှ မပါသွားရင် အရိုက်လဲခံရမယ် .. ထမင်းလဲမစားရဘူးတဲ့ … အဲဒီသူခိုးကလေးလေးကို ကျွန်မ မရိုက်ရဲခဲ့တော့ပါ။ အိမ်ရှေ့မှာ နွားချေးတစ်ပုံရှိရင် ကုလားကလေးလေးတွေက လာသိမ်းပြီ … မင်းဘာလုပ်မလဲမေးတော့ ထင်းအစားသုံးမှာတဲ့ …
Globalization and Nationality
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ခေတ်ပညာတတ် မျိုးဆက်သစ်များ ဘယ်ရွှေ့ဘယ်မျှ ကျန်ရှိနေပါသေးသလဲ????
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာလို့ပဲ ပြောရမလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲလာတာ သတိထားမိပါသလား??? ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ လူဦးရေအဆမတန် ပွားများလာတာကတော့ လူတိုင်းသတိထားမိမှာပါ …
ဒီကဏ္ဍနှစ်ခုအကြား မျှခြေက တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်လာတော့ … ဟော ဖြစ်လာပြီ … ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူမျိုးရေးပြသနာတဲ့ … လူမျိုးရေးပြသနာ အမှန်တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လား … ဒါနယ်မြေလုတာပါ ..
လူမျိုးမြိုမှ လူမျိုးပျောက်မယ်တဲ့ … ရခိုင်တွေ ကုလားနဲ့သွေးမနှောတော့ လူမျိုးရေးပြသနာလို့ ထင်ကြတယ် … မြန်မာပြည်အနှံ့မှာရော ဒီလိုပြသနာအတွက် သတိရှိကြပါရဲ့လား ?? ရခိုင်ဒေသပြီးရင် သူတို့ ရပ်နားသွားမှာလား?? မြန်မာပြည်အနှံ့က မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးကို သတိပေးချင်ပါတယ် .. ဒါဟာ လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါ …. နယ်မြေလုပွဲပါ … ခိုးဝင်ခိုလှုံသူ နိုင်ငံမဲ့ အိမ်ခြေမဲ့တွေက အိမ်ရှင်တွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် နယ်မြေဒေသကို လုယူဖို့ ကြိုးစားခြင်းပါ … သူတို့ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှအထိ ကြံစည်ထားသလဲဆိုတာ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲ???
ဂေဇက်ကို ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ်ပို့စ်တင်ဖြစ်ပါတယ် …
mintharlay 58 says:
အင်းဟုတ်တယ် အဲဒီဘင်္ဂလီတွေဘယ်လို ပမာဏနဲ့ ဘယ်အထိပေါက် ရောက်နေပြီဆိုဒါ ခန့်မှန်းလို့မရတော့ဘူး
1988 နောက်ပိုင်း ရှေ့ပိုင်းမှာတော့
ခရိုင်ပြည်မှာ လူ(၁၀) ဦးလမ်းလျှောက်လာရင် ကုလား(၂)ဦး ပါ ပါတယ်
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းလူ(၁၀)ဦးမှာ ကုလား(၅)ဦး
၁၉၉ဝနောက်ပိုင်း လူ(၁၀)ဦးမှာ ကုလား(၆)ဦး
ယခု ချိန်မှာတော့ လူ(၁၀)ဦးမှာ ကုလား(၈)ဦးခန်ဖြစ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်
ရာခိုင်နှုန်းအရ ကုလားဦးရေ တိုးပွားလာမှု ကို တွက်ယူနိုင်ပါတယ်
တစ်ခု ထူးခြားချက်ရှိပါတယ် ရခိုင်ကုလားဆိုတာမရှိပါဘူး
ဒါပေမယ့် ကုလားတွေက မုတ်ဆိတ်ရိပ်လိုက်ပြီး စကာေးပြာတော့ ရခိုင်လိုပြောနိုင်တဲ့အတွက်
မသိတဲ့လူများက ရခိုင်ကုလားလို့ ထင်ကြတာပါ
ရခိုင်လူမျိုးဟာ ဘယ်လောက်ထိ လူမျိုးကြီးသလဲဆိုရင်
ကုလား လူမျိုး သေခါနီး အဖိုးကြီးဖြစ်နေပါစေ အခုမှ မွေးတဲ့ ရခိုင်ခလေး က ထိုအဖိုးကြီးထက် အသက်တစ်လကြီးပါတယ်တဲ့ ဒါကြောင် ထိုအဖိုးကြီးကို ကလေးကအစ ““ဟေ့ကောင်””လိုပဲခေါ်ပါတယ်
ဒါပြင် အဲဒီဒေသမှာ ကုလားတစ်ယောက်လမ်းလျှေက်လာရင် ခလေးကအစ ““ကုလား…တစ်ကောင်…လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်””
ဒီအချက် ကိုကြည်ရုံနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကုလားနဲ့ရခိုင်မနီးစပ်နိုင်တာသိသာပါတယ် ။။။။။။။။
ဒါဟာ လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါ …. နယ်မြေလုပွဲပါ … ခိုးဝင်ခိုလှုံသူ နိုင်ငံမဲ့ အိမ်ခြေမဲ့တွေက အိမ်ရှင်တွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် နယ်မြေဒေသကို လုယူဖို့ ကြိုးစားခြင်းပါ … သူတို့ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှအထိ ကြံစည်ထားသလဲဆိုတာ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲ???
ရခိုင်လူမျိုးနေ နှစ်ပေါင်း 40 နီးပါးရင်စီးခံလာခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကို အခုမှတစ်နိုင်ငံလုံးက ညီအစ်ကိုသားချင်းတွေသိရတာပါ ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေရင်နဲ့မဆန့်အောင်ခံစားလာရတာ ကြာပါပြီ ။
မသူသူရေ… အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်တော့မှ ပို.စ်လှလှလေးတွေ ရေးနော်.. အားပေးနေမယ်..
ပထမဦးဆုံးပို.စ် ဆိုလို. အားပေးလိုက်ပါတယ်….
အခုတော့ မသူသူ ပို.စ်ထက် အရေးကြီးတဲ့ ဟာတွေ လုပ်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်.. ဘာမှအားမငယ်နဲ.နော်…
အားပေးသွားပါတယ် မသူသူရယ်။ ရခိုင်ပြည်ကြီး မြန်မြန်အေးချမ်းပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေရန်က မြန်မြန်
အော် ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေလဲ ခိုင်းကောင်းတော့ နွာမှန်းမသိ ကျာမှန်းမသိပေါ့။
ကျားမှန်းလဲသိရော ဒင်းက လူစကားတတ်နေပြီ။
လူပါလူပါ အော်တဲ့သူတွေ ရှိနေပြန်တော့ အင်း ။ ။
ဒို့သာသနာက အနှစ်၂၀ဝ မှ တည်ပါအုံးမလား။
အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။ ရေးပုံကလဲ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလဲ ဘာမှ သိပ်သိတာမဟုတ်တော့ သိပ်မပြောရဲဘူး။ ရင်ထဲမှာတော့ ခံစားရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အပြစ်မြင်နေတာကတော့ မှားတာ မှန်တာ မသိဘူး။ ၁-ကတော့ သူတို့ကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးသူတွေလို့ပဲ မြင်နေသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်လဲ အကြောင်းအမှန်ကို မသိပဲနဲ့ပြောရတာလဲ သိပ်ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အားပေးတယ်နော် နောက်လဲ ရေးဦး။ ကျန်းမာပါစေ။
နှစ်ခုလုံးပါ။ ဘင်္ဂါလီ ဥိးရေတိုးလာတော့ ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းတွေရဲ့ အိမ်ခြေကြုံ့ကုန်ပါတယ်။ အရင်က ခေါင်းရွက်ကူလီလုပ်သူတွေ ငွေမျက်မျက်ကလေးရလာရှိလာတော့၊ ခေါင်းထောင်လာပါတယ်။ ငွေများတရားနိုင်ခေတ်လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ခေတ်မှာ၊ အရင်သူများမလုပ်ချင်တာလုပ်ကြရသူတွေ၊ ကအခု ဒေသခံတွေကိုတကျော်ပြန်ပြီး ချယ်လှယ်လွှမ်းမိုးချင်လာကြတာ၊ ဓမ္မတာပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ရင် အမေရိကနိုင်ငံရဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက Indians တွေမို့ Native Indians ဆိုပြီးဥပဒေတွေပြဌာန်းပြီး ခံစားခွင့်တွေ ပေးပြီးတောင် ကာကွယ်ရ၊ ခံစားခွင့်ပေးရပါတယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ဥရောပက နယ်သစ်အခြေချသူတွေက ခုချိန်လွှမ်းမိုးပြီးအကျနေရာယူပြီးနေပြီလေ။ Native Indians တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရမယ်ဆိုတာထင်သာမြင်သာကြီးပါ။
ရခိုင်ကိစ္စမှာတော့ နောင်မမြင်ရသောခေတ်တခေတ်မှာ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေ ကလူများစုဖြစ်လာနိုင်မလား….။ ရင်လေးစရာပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ နယ်သစ်ပယ်သစ်ရှာပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲနယ်သစ်ပယ်သစ်ရှာ အလုံးအရင်းလိုက် ပြောင်းခိုနေထိုင်သူတွေ၊ ရှိလာမဲ့သမိုင်းတပါတ်လည်တဲ့ခေတ်တော့ မရောက်လောက်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဘတပြန်ကျားတပြန် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခမှုကတော့ ကြိုကြားဖြစ်လာနိုင်သေးစရာ ရှိနေအုံးမှာပါ။
ဥိေးဆာင်မှုကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ အမျှော်အမြင်ကြီးကြဘို့ဘဲလိုပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးမှာ မူဆလင်ကိုးကွယ်တာ မရှိဘူး လို့ သူလေး ရေထားတာကို သတိထားမိတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဘေးရန်ကင်းကွာ ကြပါစေ။
ကျွန်မသူငယ်ချင်း စစ်တွေသူတစ်ယောက်ကလဲ အခု မသူသူပြောသလိုပဲ ပြောပြဖူးပါတယ် …
ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှသိ ဆိုသလို … မသူသူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ချင်းစာမိသလို … ဒီအရေးကိစ္စဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲသာမကပဲ တခြားမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ပါ သတိထားသင့်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်မိပါတယ် …
ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွတ်စလင်ဘာသာက နိုင်ရိုးထုံးစမရှိပါဘူး … သူသူရေ။ တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက မြင့်မြတ်ပြီးသားပါ။
အမကတော့ အကြံပြုချင်တယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကို ဘုရားတန်ခိုးတော်နဲ့အနိုင်ယူရင်ရော..။
ဥပမာ …ရပ်မိရပ်ဖတွေ တိုင်ပင်ပြီး ရပ်ကွက်အလိုက်/ရွာအလိုက် အသံမစဲ ပဌာန်းပွဲတွေ၊မေတ္တာသုတ်တော်၊
ဓါရဏပရိတ်တော်၊ ပရိတ်တရားတော်တွေ ရွတ်ဖတ်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မတွယ်ကပ်နိုင်အောင် ဘုရားဂုဏ်တော်တွေနဲ့ တားဆီးပေးရင်ရော…။ ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ ရခိုင်သူ/ရခိုင်သားတွေ ဘာသာရေးကို
ဖိဖိစီးစီးလေး လုပ်ကြည့်ရင်ရော။ အမကတော့ ဘုရားမှတပါးကိုးကွယ်ရာမရှိဆိုတာကို ယုံတယ်။
တရုတ် ပြည်မကြီးက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဘာလို့ သိုင်း သင်ကြသလဲ .. ဆိုတဲ့ ရာဇဝင် လေးများ .. စိတ်ဝင်စား ရင် ရှာဖတ်ကြည့်စေလိုပါကြောင်း …။
တကယ်တော့ တလုပ်ပြည်က သိုင်းကလည်း
ဖောင်ဖောင် နင်ပြေးရင်ပြေး မပြေးရင် နင့်ဂိုတဂျီးမင်းလာနှပ်ရော့မယ် ……
စာလုံးရေနည်းပေမယ့် အဓိပါယ်ကျယ်ပြန့်တဲ့မေးခွန်းလေးလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
ကိုယ်တစ်ဦးတည်းအမြင်ကိုရေးရလျှင်တော့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး လုံးဝမဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်သော နိုင်ငံအဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၉ဝ ရာနှုန်းကျော်ရှိသော ဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ကျန်ဘာသာဝင်များကို နှိပ်စက်ကလူပြုလိုပါမူ မြန်မာနိုင်ငံသည် အချို့သော မွတ်စလင်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ဘာသာခြားကင်းမဲ့သောနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာရှည်လောက်ပြီဖြစ်သည်။
နယ်မြေလုပွဲဟု ခေါ်ဆိုရသော် နှစ်ဖက်သောအင်အားစုတို့မှာ ရေမြေတစ်ခုတည်းမှ ပေါက်ပွားကြီးပြင်းလာသောသူများအဖြစ် မှတ်ယူရတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရခိုင်အရေးတွင် ရိုဟင်ဂျာသည်ကား မြန်မာ့မြေမှပေါက်ပွားလာသော ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဟုတ်သည်မှာ လယ်ပြင်တွင် ဆင်သွားသကဲ့သို့ ရှင်းရှင်းကြီး ရှိနေပါသည်။ ယခင် ပါရှား(ယခု အီရန်)မှ ရောက်ရှိလာသော ရေမျောကမ်းတင်၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်၊ ရွက်ကျပင်ပေါက် လူမျိုးများသာဖြစ်သဖြင့် နယ်မြေလုပွဲဟု အမည်တပ်ရန် လားလားမျှ မသင့်တော်ပေ။
သို့ပါသဖြင့် နောက်ဆုံးကျန်သော တပ်ရန်အမည်ကား ကျူးကျော်ရန်စမှု ဟုသာဖြစ်ပါတော့သည်။
မှန်ပါတယ်။ကျူးကျော်ရန်စမှု ့တစ်ခုအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ပါကြောင်းနှင့်
နောက်ကွယ်မှာလဲ ရှုပ်ထွေးမှု့တွေရှိ နှိုင်ပါကြောင်းနှင့်အတူ
မည်သို့ ခုခံကာကွယ်သင့်ပါသလဲ ဆိုတာပါ စဉ်းစားပေးစေလိုပါကြောင်းးးးးး
ရခိုင်လူမျိုးတွေကစိတ် ကောင်းရှိတာကို အခွင်း ကောင်းယူပြိး အသုံးချ ခံလိုက်ရတာ ဘဲလေ နောက်နောင်ကို သင်ခန်းစာ တခုပါဘဲ
ရခိုင်လူမျိုးမှာ မွတ်စလင်မ်မရှိဘူးဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သမိုင်းထဲ ဗမာဘုရင် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်၊ရခိုင်
ဘာကြောင့်ပေးသလဲဆိုတော့ အဲဒီခေတ်က ရခိုင်ဘုရင်
တွေ ကုန်သွယ်ကြတာ ပါရှန်းတွေနဲ ့မို ့ပါဘဲ။သူ ့နာမည်၊
ကိုယ့်နာမည် အပြန်အလှန်မှည့်ကြတာပါ။သူတို ့ငွေသား
ကို ရခိုင်မှာ သုံးနိုင်သလို၊ပါရှန်းငွေကို ရခိုင်မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်တွေ စတင်ဝင်ရောက်နေပါပီ။
နောက်ပိုင်းပေါ်တူဂီ နိုင်ငံသား လေးသည်တော်တွေကို
နေ ပေါ်တူဂီအစပ် ကမန်တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဖြစ်လာတာ
ပပ။သမိုင်းကို အတိအကျမသိရင် မရေးစေချင်ပါ။ဒီအကြောင်း
အရာကို ပို ့စ်တစ်ခုတင်ပေးပေါ့မယ်။
ကွန်မန့်ရေးပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် …
နောက်ထပ် ပို့စ်တစ်ခု ထပ်ရေးပါအုန်းမယ် …
မည်သည့်ဘာသာမဆို ဘာမှန်းမသိ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး မကိုးကွယ်ပါနှင့်
ဘာသာဆိုတာ လူတစ်ဦးခြင်း၏ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နှင့် ကိုးကွယ်သည့်အတွက်
သူပုန်အများဆုံးနိုင်ငံက ဗမာပြည်ပါ ဒါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချူပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရက
လက်တစ်ဆုပ်စာလေးကို ထိုင်ကြည့်နေတာ သဘောမပေါက် သေးဘူလါး။
ကမန် ဆိုတဲ့ လေးသည်တော် တွေ အကြောင်း စာပေဗိမန် ထုပ်စာတအုပ်မှာဖတ်ဖူးတယ် ။ ပါရှန် စကားဆိုလားပဲ ပြန်ရှာကြည့်အုံးမယ်
ရခိုင်လူမျိုး များ ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ သူတို့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့လို့ အခုမှ ဒီအရေး အများသိကြရတာပါ။
ရခိုင်သူ ရခိုင်သားများ အေးချမ်းကြပါစေ။
အခုပဲ သတင်းမှာ တွေ့လိုက်တယ်.. ဘင်္ဂလားဒရှ် ကို ထွက်ပြေးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟိုကလည်း လက်မခံပဲ ပြန်လွတ်တယ်တဲ့.. ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နဲ့ မြန်မာမှာ အသေခံ ဆက်ပြီး သောင်းကျန်းနေရင်တော့ ခက်တော့မှာပဲ..
သူ့အမျိုး၊ဘာသာတူချင်းတောင် ကြောက်တယ်ဆိုတော့လဲ အင်းးးးးးး
ကျွေးမွေးထားတဲ့ သခင်အိမ်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်း၊ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်တော့လဲ
ပင်လယ်ထဲတင်သေကြပေါ့ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံထဲ ပြန်ဝင်လာရင်လဲ ရေတပ်ကဗျင်းပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာ့မြေ ဒီကောင်တွေအတွက် ပုတ်စော်အနံမခံနှိုင်ဘူး။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပါတ်သက်ရင် လူလို့မသတ်မှတ်တဲ့အတွက် လူသားချင်းမစာနာနှိုင်ဘူး။
အမေစုပြောသလို နယ်ခြားစောင့်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလဲ အလွန်အရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ် … ဘင်္ဂလားကလူတွေ ကျွန်မတို့ဆီဝင်တော့ လွယ်လိုက်တာ … သူတို့ဆီကို ပြန်သွားတော့ သူတို့ဘက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်က ပေးမဝင်ဘူး … အစိုးရက လက်မခံနိုင်ကြောင်း အကျိုးအကြောင်းနဲ့ တရားဝင်ကြေညာတယ် .. ဒါဆိုရင် ဒီပင်လယ်ထဲကလူတွေ ကျွန်မတို့ဆီကိုလဲ ပြန်မဝင်ရဘူးဆိုရင် သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ??
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရခိုင်တွေများတယ်၊ ခင်မင်နေတာကြပြီ
ဆိုတော့ သူတို့ရိုဟင်ဂျာရန်က ဘယ်လောက်ကာကွယ်ခဲ့ရလဲဆိုတာ အစကတည်းက သိခဲ့ပါတယ်
ရခိုင်တစ်ယောက်ရှေ့မှာ “ရခိုင်ကုလား”လို့ အသံထွက်လိုက်ရင် အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုပဲ
ရခိုင်မှာ ကုလားမရှိ၊ ရခိုင်နဲ့ ကုလားသပ်သပ်တဲ့
ရခိုင်မတစ်ယောက်များ ကုလားနဲ့ယူလိုက်ရင် မိဘဆွေမျိုးတင်မက ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးက သေခန်းပြတ်တဲ့
တဏှာဘီလူးတွေကြားထဲမှာနေရတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသမီးလေးတွေမှာ အန္တရာယ်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတာ … မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်သာ ယနေ့အထိ ရခိုင်ဆိုတာ လူမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ..
သိပ်တော့ မပူပါနဲ့ကွယ် ….။ လဝက ဥပဒေ အသစ်လာတော့မယ်…။ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်….။